ချင်းမိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ချင်းမိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် (အင်္ဂလိပ်: Chiang Mai International Airport; ထိုင်း: ท่าอากาศยานเชียงใหม่) သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်ခရိုင် မြို့တော် ချင်းမိုင်မြို့တွင် တည်ရှိသည်။ ချင်းမိုင် လေဆိပ်သည် ထိုင်းနိုင့်ငံ မြောက်ပိုင်း၏ အဓိက တံခါးဝ ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း စတုတ္ထမြောက် အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
60 Mahidol Rd, Tambon Suthep, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand
ကန် လေကြောင်းလိုင်း၊ နော့ လေကြောင်းလိုင်း၊ ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်း
၁,၀၃၆ ပေ / ၃၁၆ မီတာ
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ချင်းမိုင်လေဆိပ် တည်နေရာပြ မြေပုံ
18/36 3,100 ၁၀,၁၇၁ နိုင်လွန်ကတ္တရာ
ချင်းမိုင်လေယာဉ်ပြေးလမ်းကို ဝေဟင်မှ တွေ့ရစဉ်
၃ လေကြောင်းလိုင်းများနှင့် ပျံသန်းရာမြို့
လေဆိပ်ကို ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင် စုတက် လေဆိပ်အဖြစ် စတင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဆန္ဒပြမှုများဖြင့် သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ် ခေတ္တပိတ်ထားခဲ့ရချိန်တွင် ချင်းမိုင်လေဆိပ်သည် တရုတ်လေကြောင်းလိုင်း၊ ဆွစ် အင်တာနေရှင်နယ် လေကြောင်းလိုင်း တို့၏ ရပ်နားရာ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် ချင်းမိုင်လေဆိပ်သည် ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်း၏ ဒုတိယ အခြေစိုက် လေဆိပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် လေကြောင်းလိုင်း ၁၉ ခုမှ ချိတ်ဆက်ပျံသန်းလျက် ရှိပြီး ခရီးသည် စုစုပေါင်း ၅.၃ သန်း၊ လေယာဉ်အစီးရေ ၄၃,၀၀၀ နှင့် ကုန်တန်ချိန် ၁၈,၀၀၀ တန်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် လေဆိပ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေယာဉ်ခရီးသည် အတင်အချပြုလုပ်ရာ နေရာတိုးချဲ့ခြင်း၊ ၂၄ နာရီပြည့် လည်ပတ်ခြင်း နှင့် ပြည်ပ ဆိုက်ရောက်ခန်းမ နှင့် ပြည်တွင်း ထွက်ခွာ ခန်းမ တို့ တိုးချဲ့ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
လေဆိပ်သည် ပင်လယ်ပြင်မျက်နှာပြင်အထက် ၃၁၆ မီတာ (၁၀၃၇ ပေ) တွင် တည်ရှိသည်။ နိုင်လွန်ကတ္တရာ လေယာဉ်ပြေးလမ်း တည်ဆောက်ထားပြီး အရှည် ၃၁၀၀ မီတာ (၁၀၁၇၁ ပေ) ရှိသည်။ လေဆိပ် အဆောက်အဦး (၂) ခု ရှိပြီး (၁) ခုမှာ ပြည်တွင်း ခရီးသည်များအတွက် ဖြစ်ပြီး (၁) ခုမှာ ပြည်ပ လေယာဉ်များအတွက် ဖြစ်သည်။
Air Asia ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြည်ပ
Air China ပေကျင်း၊ Tianjin (resumes 29 March 2016)၊ Wuhan ပြည်ပ
ဘန်ကောက် လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက်၊ Ko Samui, Mae Hong Son (begins2April 2016), ဖူးခက် ပြည်တွင်း
ဘန်ကောက် လေကြောင်းလိုင်း မန္တလေး၊ ရန်ကုန် ပြည်ပ
China Eastern Airlines ကူမင်း၊ ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း၊ Tianjin ပြည်ပ
China Southern Airlines Changsha, Guangzhou, Nanning ပြည်ပ
Juneyao Airlines ရှန်ဟိုင်း ပြည်ပ
ကန် လေကြောင်းလိုင်း Hua Hin, Khon Kaen, Mae Hong Son, Nan, Pai၊ ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း၊ ပတ္တရား-ဦးသဖောင်၊ ချင်းရိုင် Phitsanulok, Ubon Ratchathani ပြည်တွင်း
Korean Air ဆိုးလ်
Seasonal: Busan ပြည်ပ
လာအို လေကြောင်းလိုင်း Luang Prabang ပြည်ပ
မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်း ရန်ကုန်  ပြည်ပ
နော့ လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း၊ Udon Thani ပြည်တွင်း
Shandong Airlines Chongqing, Jinan ပြည်ပ
Sichuan Airlines Chengdu ပြည်ပ
Spring Airlines Chengdu, ရှန်ဟိုင်း ပြည်ပ
ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း၊ ဟိုက်ရိုင်၊ Krabi, ပတ္တရား-ဦးသဖောင်၊ ဖူးခက်၊ Surat Thani ပြည်တွင်း
ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်း Hangzhou, Hong Kong, Macau
Charter: Chengdu, Chongqing ပြည်ပ
ထိုင်း လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက် ပြည်တွင်း
ထိုင်း လေကြောင်းလိုင်း ကူမင်း (၂၀၁၆ မတ် ၂၇ ပြန်လည်ပြေးဆွဲ) ပြည်ပ
ထိုင်းလိုင်းရင်း လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း ပြည်တွင်း
ထိုင်းစမိုင်း လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း၊ ဘန်ကောက်-သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ ဖူးခက် ပြည်တွင်း
Tigerair စင်ကာပူ ပြည်ပ
T'way Airlines Seasonal charter: Muan, ဆိုးလ် ပြည်ပ
V Air ထိုင်ဝမ် ပြည်ပ
အဲကေဘီဇက် ရန်ကုန် ပြည်ပ
↑ AOT Investors Site။ 27 November 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 Dec 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Airport information for VTCC from DAFIF (effective Oct 2006)
↑ Airport information for CNX at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective October 2006).
↑ Air Transport Statistic။ 2015-01-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar National Airlines Plans Chiang Mai Flights from late-Dec 2015. Airline Route. 1 November 2015. Retrieved 1 November 2015.
↑ AirAsia Adds Krabi-Chiang Mai, Krabi-Singapore Flights Increases Bangkok-Krabi
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချင်းမိုင်_အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ_လေဆိပ်&oldid=409652" မှ ရယူရန်
၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။